Iripi maneja maneja paMac? | Ndinobva mac
Jordi Gimenez | | Mac Os X, Zvimwe Zvirongwa zveMac, Tutorials
Chimwe chezvishandiso zvinoshandiswa nevashandisi veMac ndiyo OS X Chiitiko Monitor. Vazhinji vashandisi vanouya kuOS X vanobva kuWindows uye chishandiso ichi ndicho chatingaenzanise neinozivikanwa uye anoshandiswa zvakanyanya "Task Manager" ayo akabatanidzwa muWindows operating system. Hongu, ndezvekukwanisa kuona kushandiswa kwemuchina wedu maererano nemukati mehardware: zvikamu zvekushandisa kweiyo CPU, Memory, Energy, Disk uye Network.
Kana isu tichitaura nezve Chiitiko Chekutarisa muOS X isu tinotaura nezve kuve nekutonga pamusoro pemaitiro edu paMac uye izvi pasina mubvunzo zvinonakidza kune vamwe vashandisi. Muchidimbu, uye kune isu tese tanga tichishandisa Windows kwemakore mazhinji, ndizvo zvazviri aizova Task Manager iyo inotangwa kana tichiita mubatanidzwa "Ctrl + Alt + Del", asi muMac OS X inonzi Activity Monitor uye iri nyore kuvhura sezvo iine chishandiso chayo mukati meLaunchpad yedu, iyo inotibvumidza isu kuivhura kubva kuLaunchpad pachayo, kubva kuSpotlight kana kunyangwe kubva kuKutsvaga muApplication folda. Tichaona zvimwe zvakawanda nezve iyi Chiitiko Monitor uye zvidiki zvidiki zvainovanza.
1 Maitiro ekuvhura Chiitiko Monitor
2 Basa maneja ruzivo paMac
Maitiro ekuvhura Chiitiko Monitor
Zvakanaka, kana iwe wakasvika pano ndezvekuti iwe unongoda kuziva rese data rekushandisa reMac yako nyowani.Ndakatotaura pakutanga kuti tine sarudzo dzakasiyana dzekuvhura iyi Chiitiko Monitor asi chakanakisa chinhu kana tichizo ishandise zvakanyanya uye kuti uwane kuwana zvirinyore, izvo zvatinokupa zano ndezvekuti iwe chengeta chako Chiitiko Chekuongorora munzvimbo inogoneka kuti uone dhata nemaitiro chero nguva. Izvi zvakapusa kuita uye iwe unongofanirwa kuwana kubva kune yako Launchpad> Dzimwe dhairekitori> Chiitiko Chekutarisa uye dhonza iyo application kudock.
Iwe unogona zvakare kuwana iyo yekutarisa yekutarisa uchishandisa Spotlight kana mukati meApplications> Zvishandiso folda. Chero ipi yemaitiro matatu inoshanda kwauri.
Nenzira iyi iyo Chiitiko Chekutarisa chinenge chakanamatira muDock uye hauchazofaniri kuwana kubva kuLaunchpad, Spotlight kana Tsvaga, ichave yakananga kubaya kamwe chete uye tichava nekukurumidza nekukurumidza kuwana patinogara pamberi pe iyo Mac. inotibvumidza kuwana izvo "zvakavanzika kwazvo sarudzo" yeiyi Activity Monitor iyo yatichaona muchikamu chinotevera.
Basa maneja ruzivo paMac
Ichi pasina mubvunzo ndicho chikonzero chechinyorwa chino. Tichaenda kunoona yega yega yega yega ruzivo rwekuti Chiitiko Chekutarisa chinotipa uye nekuda kweizvi isu ticharemekedza marongero ematebhu anowanikwa mune ino inobatsira OS X chishandiso. bhatani rine «Ini» iyo inotipa ruzivo nezve maitiro nekukurumidza uye iyo rin'i giya (marongero mhando) muchikamu chepamusoro chinotipa sarudzo dze: process sampling, mhanyisa espindump, mhanyisa system diagnostics nevamwe.
Chikamu cheidzi sarudzo dzakavanzika dzatataura nezvadzo pakutanga kwechinyorwa ndiyo sarudzo yekusiya dhoketi yakadzvanywa, tinogona kugadzirisa chitarisiko chayo uye kuwedzera hwindo mumenu yekushandisa uko girafu rekushandisa richaonekwa. Kugadzirisa icon yekushandisa uye kuona maitirwo acho isu tinongofanira bata pasi dhoketi icon> Doko icon uye sarudza izvo zvatinoda kuongorora zvakafanana.
Izvi pamwechete naMemoria hapana mubvunzo chikamu chinonyanya kushandiswa neni uye zvachinotiratidza ndicho muzana rekushandisa kweumwe neumwe weekushandisa unomhanya. Pakati pechimwe nechimwe chezviitiko tinokwanisa kuita akasiyana mabasa sekuvhara maitiro, kutumira mirairo uye zvimwe. Mukati meiyo CPU sarudzo isu tine akasiyana data aripo: Iyo muzana yeCPU inoshandiswa nechero application, iyo CPU nguva yeiyo tambo, Kumisikidza mushure mekusaita basa, iyo PID uye mushandisi ari kuita iyo application pamushini.
Mukati meyeMemory sarudzo tinogona kuona akasiyana uye anonakidza data: ndangariro dzinoshandiswa neese maitiro, iyo yakadzvanywa ndangariro, iyo Threads, iyo Ports, PID (ndiyo nhamba yekuzivisa yeichi chiitiko) uye mushandisi ari kuita izvi maitiro.
Iyi hapana mubvunzo imwe pfungwa yekufunga nezvayo kana tikashandisa MacBook sezvo ichitipa iyo kushandiswa kweimwe yeaya maitiro kuti isu tine zvinhu paMac. Iyi Energy tebhu inotipa data rakasiyana senge: simba rekukanganisa maitiro, avhareji yesimba simba, ingave kana kwete Nap App (App Nap chinhu chitsva chakasvika muOS X Mavericks uye zvinobva zvango deredza zviwanikwa zvehurongwa kune zvimwe zvikumbiro izvo zvisiri kushandiswa parizvino), Dzivirira idle uye mushandisi kupinda.
Ziva kune chigunwe icho chiri kugadzira Kuverenga nekunyora iri kuwedzera kukosha nekuda kwekumhanyisa kwemaSDD azvino. Aya ma disc ane Flash memory uye zvirokwazvo anomhanyisa zvakapetwa kaviri semaDVD disc, asi iwo zvakare "anomhanyisa kumusoro" pavanoverenga nekunyora zvakanyanya. Mune iyo Disk sarudzo yeActivity Monitor isu tichaona maBheti akanyorwa, MaBhete kuverenga, iyo kirasi, iyo PID uye mushandisi weichi chiitiko.
Iyi ndiyo yekupedzisira yemathebhu anopiwa neiyi yakazara Chiitiko Chekutarisa muOS X. Mairi tinowana data rese richinongedzera mukufambisa kwemidziyo yedu uye tinogona kuona iwo akasiyana maficha enzira yega yega. uye Mapakeji akagashirwa uye iyo PID.
Pakupedzisira ndezve tora ruzivo pane ese maitiro iyo Mac yedu inoita, kusanganisira maNetwork, uye kukwanisa kuavhara kana kucherechedza zvikamu zvinoshandiswa nezvimwe zvinoshandiswa nemaitiro paMac yedu. Zvakare, kuva nesarudzo yekushandura dhoketi dhoketi kuti uone ruzivo rweChiitiko Chekutarisa mukati. inguva chaiyo yakanaka kuti uone anomalies kana zvisinganzwisisike zvinodhaka. Zvakare kuve nezvose zvine girafu muhwindo pacharo kunobatsira kutsanangudza kwemapoinzi ese.
Chokwadi iyi Chiitiko Chekutarisa chinoita kuti zvive nyore kwatiri kuti tione maitiro atanga tichinetseka nezvawo uye nesarudzo inotitendera kuti tivhare iyo zvakananga kubva ipapo, chii zvinoita kuti basa rive nyore kumushandisi. Kune rimwe divi, zvirokwazvo anopfuura mumwe wevashandisi vanobva kuWindows operating system inoshandiswa kuita iyo Ctrl + Alt + Del kiyi yemubatanidzwa kuti uone Task Manager uyezve muMac OS X iyi sarudzo haipo.
Izvo zviri pachena ndezvekuti kana iwe uchibva kuWindows, iwe unofanirwa kukanganwa nezve yakasarudzika task maneja nekuti paMac inonzi "Chiitiko Chekutarisa". Paunokurumidza kujaira, zvirinani, sezvo izvi zvichachengetedza nguva uchitsvaga chishandiso chisipo muMacOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Iripi maneja maneja?
semazuva ese mac anozviita zvirinani kupfuura windows
Pindura kuna tommaso4
Alejandra Solorzano M akadaro
Mhoroi, ini ndoda rubatsiro, handizive kuti ndingawana sei idzi mbiri sarudzo dzeMac inoshanda system.Ndinoda rubatsiro.Mungandibatsirewo?
Mac mudziyo manejimendi
Pindura kuna Alejandra Solorzano M
Ini ndinoda ndeapi maneja wekuunza mac
Pindura kuna madisson
BioShok Remastered ichaburitswa kupera kwegore rino kune macOS